I-motorola razr 2 umhla wokukhutshwa, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Eyona Iindaba Kunye Nokuphononongwa Umhla wokukhutshwa kweMotorola Razr 2, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Umhla wokukhutshwa kweMotorola Razr 2, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Inkqubo ye- Iselfowuni URazr 2020 ulapha ngokusemthethweni! Ifowuni esongelayo ilungele ukusichukumisa ngokubalula okuphuculweyo kunye nokuphuculwa okuninzi ngaphezulu kweRazr yonyaka ophelileyo, ngelixa igcina uyilo lwayo lokutsala amehlo, slim, kunye nokudityaniswa. AbakwaMotorola bathi bamamele ingxelo ye-2019 Moto Razr yabathengi kwaye ngolu hlobo lokuphola olupholileyo, inkampani izamile ukuphucula amava asongekayo. Iimpawu, uyilo, ikhamera: yonke into ibonakala ngathi iphuculwe, ubuncinci ephepheni.
IMotorola Razr 5G
Kuvuliwe, i-256GB, iGrafite eKhazimlisiweyo
$ 400 isaphulelo$ 94999$ 139999 Thenga kwiBestBuy
Iselfowuni razr (2020)
$ 139999 Thenga kwi Motorola
Umhla wokukhutshwa weRazr 2020
Ixabiso leRazr 2020
Iinkcukacha zeRazr 2020
Uyilo lweRazr 2020
Umboniso weRazr 2020
Ikhamera yeRazr 2020
Inkqubo yeRazr 2020 kunye neMemori
I-Razr 2020 yobomi bebhetri
Umhla wokukhutshwa kweMotorola Razr 2020
Ewe, emva kwamahemuhemu amaninzi kunye nokuvuza, usuku olulindelwe kakhulu lufikile kwaye iMotorola ekugqibeleni ibhengeze ubuhle beMoto Razr. Ngoku, iRazr 2020 ekugqibeleni ijoyina isihlwele esongekayo kwaye iya kufumaneka ukuze ithengwe ngamanye amaxesha okuwa! Okwangoku awunawo umhla wokukhutshwa ngqo, kodwa xa sele senzile, siya kuqinisekisa ukukuhlaziya kuwo!
I-Motorola Razr 2020 Ixabiso
Ixabiso likaRazr le- $ 1,399 liqinisekisa iinjongo ze-Motorola zokudubula kwintengiso ye-premium ye-smartphone, nangona, ngethamsanqa eli xabiso lisezantsi kunoko besikulindele ngaphambili.
Jonga oku nazo:
Moto Razr vs Galaxy Z Flip Moto Razr 2020 vs Moto Razr 2019
I-Motorola Razr 2020 Iinkcukacha
Kulungile, masitsibe ngqo kwenye yezona zinto zinomdla kwiMoto Razr 5G entsha. Sibona ukuphuculwa okubonakalayo kwisebe le-specs xa kuthelekiswa neRazr yonyaka ophelileyo. Nanku ukujonga kwiphepha elisemthethweni leMoto Razr 2020:
Bonisa: 6.7 intshi ephambili; yangaphandle: i-intshi ye-2.7
Ikhamera: I-48MP ephambili ene-OIS, i-laser autofocus; Ngaphambili 20 MP
Izixhobo: I-Qualcomm Snapdragon 765G, 8GB ye-RAM
Ukugcina: 265GB, ayinakwandiswa
Ibhetri: 2,800mAh, 15W TurboPower ukutshaja
I-OS: I-Android 10, iMotorola ye-UX yam (ubuqu, ukuBonisa uMlilo, iZenzo zeMoto, ixesha leMoto, iVidiyo yoMsindo)
Jonga zonke iiNkcukacha zeMoto yeRazr 2020
Uyilo lweMotorola Razr 2020
IMotorola icoce ngononophelo uyilo lweRazr lwangonyaka ophelileyo kwifowuni ebukeka intle kakhulu, intle, kunye neslamshell efowulwayo yokusonga kwayo kwe2020. I-Razr ephambili ye-6.2-intshi isibonisi ijikelezwe zi-bezels ezincinci kumacala omabini, ngelixa i-chin incitshisiwe kakhulu xa kuthelekiswa nemodeli yonyaka ophelileyo. IMotorola iyiphucule ihenjisi, isenza ukuba iRazr ikhululeke ngakumbi ekusebenziseni into enye. Inzwa yeminwe ibekwe kwiglasi yesixhobo ngasemva, ngokufihlakeleyo efihliweyo phantsi kwelogo ye-Motorola. I-Razr 2020 iza ngemibala emithathu: Igrafu eKhazimlisiweyo, iLiquid Mercury, kunye neBlush Gold.
Eyona nto intle ngale folding kukuba i-Motorola ibonakala ngathi ibethelele imeko yefomathi. Kuvaliwe, iRazr yi-2.85 x 3.61 x 0.62 intshi kuphela (72.6 x 91.7 x 16mm) ngobukhulu, ibhityile kwaye iyonke incinci kune-Samsung's clamshell foldable, iZ Flip. I-Razr inobunzima be-6.77 ii-ounces (192g): nangona yayicheba ubunzima obuthelekiswa neRazr yonyaka ophelileyo, isecaleni elinzima.
Ukongeza, ihenjisi kaRazr ngoku yomelele ngakumbi, ngokweMotorola. Kwangelo xesha, inika ukuvalwa kwe-zero-gap ekufuneka inike ukhuseleko ngakumbi kwiscreen sesixhobo eluthulini nakomnye umonakalo omncinci wamasuntswana.
Umboniso weMotorola Razr 2020
Ukusongelwa kunobungakanani obufanayo bokubonisa njengokubuyiselwa kwayo kwangaphambili, ngaphandle kwamahemuhemu abonisa umboniso omkhulu. Umboniso wangaphandle nawo ubungakanani obufanayo nonyaka ophelileyo; Nangona kunjalo, ngoku ipakisha izinto ezintsha ezipholileyo. Umzekelo, ikunika ukufikelela ngokulula kwii -apps zakho ozithandayo, indlela yokuhlaziya isenzo esilinganisa izimbo zomzimba ze-Android 10, intetho-ukuya-kwisicatshulwa, impendulo eyi-smart kunye nekhibhodi epheleleyo ukuba uyayidinga.
IMotorola ithi bamamele iinkxalabo zabasebenzisi babo ngokuchitha ixesha elininzi kwiifowuni zabo. Ngoku, abasebenzisi banokukhawulela ukuskrola ngamanye amaxesha abafuna ukuphazanyiswa, ngenxa yomboniso ophuculweyo wokujonga ngokukhawuleza, obonisa olona lwazi lubalulekileyo. Ngaphezulu, ulawulo lusezandleni zakho: ungathatha isigqibo sokuba loluphi usetyenziso olufunayo kumboniso wangaphandle.
Isibonisi sangaphandle seMoto Razr 2020
Ikhamera yeMotorola yeRazr 2020
IMotorola ikwanike nothando kwinkqubo yekhamera yeRazr ngophuculo olukhulu ngaphezulu kweRazr yonyaka ophelileyo. Ngeli xesha, iRazr ixhotywe ngekhamera ye-48 MP enetekhnoloji ye-binning ye-quad-pixel, ehambelana ne-laser autofocus kunye ne-Optical Image Stabilization. Ngokufana nezinye iifowuni ezisongelayo, ikhamera ephambili inokuphinda kabini njenge-selfie shooter, ukuze ukwazi ukufezekisa ii-selfies ezikumgangatho ophezulu.
Ukuthetha ngeeselfie, iMotorola yongeze ii-tweaks zesoftware ukwenza amava e-selfie abe mnandi ngakumbi. Ufumana izinto ezinje ngeMowudi yeQela, iMowudi yePortrait, kunye noMbala woMabala. URazr unekhamera yangaphakathi ye-20 MP enokuba luncedo kwiminxeba yevidiyo.
Enye into epholileyo onokuba nayo ngeRazr 2020 ngumboniso wangaphandle weefoto, ovumela bobabini umfoti kunye nemodeli ukuba bajonge indlela ifoto eza kuphuma ngayo.
Sithathe iMoto Razr 2020 ukuba ijikeleze, jonga eyethu Uphononongo lweMoto Razr 2020 ukubona iisampulu zekhamera , amanqaku okusebenza kunye neenzuzo kunye nokubi kwefowuni.
Inkqubo ye-Motorola Razr 2020 kunye neMemori
I-Moto Razr 2020 iza neprosesa yeQualcomm Snapdragon 765G. Iprosesa ekumgangatho ophakathi okhawulezayo ixhasa i-5G (kwiindawo apho inethiwekhi ye-5G ifumaneka khona), ngelixa ilungile kwimidlalo. Imemori ikwaphuculwe ngaphezulu kweRazr 2019- iRazr entsha iza ne-8GB ye-RAM kunye ne-265GB yokugcina enganwenwanga.
I-GFXBench Car Chase kwiscreen
I-GFXBench Manhattan 3.1 kwiscreen
I-Geekbench 5 isiseko esinye
I-Geekbench 5 ye-multi-core
I-AnTuTu yinkqubo enemigangatho emininzi, ebanzi yokuma kwebench evavanya imiba eyahlukeneyo yesixhobo, kubandakanya i-CPU, i-GPU, i-RAM, i-O / O kunye nokusebenza kwe-UX. Amanqaku aphezulu athetha isixhobo esikhawulezayo ngokubanzi.
igama Ephakamileyo kungcono
Iselfowuni razr (2020) 307260
I-Samsung Galaxy Z Flip 448286
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 Ngama-588087
Iselfowuni razr (2020) 26
I-Samsung Galaxy Z Flip 31
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 36
Ukuba icandelo le-T-Rex HD le-GFXBench lifuna, uvavanyo lweManhattan lubuhlungu ngokungathethekiyo. Uvavanyo lwe-GPU-centric olulinganisa imeko yemidlalo enomdla kakhulu eyenzelwe ukutyhala i-GPU iye max. Elingisa imeko yemidlalo enomdla kakhulu kwiscreen. Iziphumo ezifunyenweyo zilinganiswa kwizakhelo ngomzuzwana, nangaphezulu izakhelo zingcono.
Iselfowuni razr (2020) 48
I-Samsung Galaxy Z Flip 47
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 56
Iselfowuni razr (2020) 594
I-Samsung Galaxy Z Flip 685
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 944
Iselfowuni razr (2020) 1672
I-Samsung Galaxy Z Flip 2428
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 3148
Iselfowuni razr (2020) 48,149
I-Samsung Galaxy Z Flip 40,223
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 73,952
I-Motorola Razr 2020 Ubomi bebhetri
Sifuna ukubona ukuphuculwa kwesebe lebhetri kunye ne-Motorola ehanjisiweyo. Ixhotyise iRazr ngeseli yebhetri ye-2,800mAh. Nangona le bhetri incinci ngokwemigangatho yanamhlanje, i-Motorola ibanga ukuba inokugcina izibane usuku lonke. Nokuba eli bango liyinyani, kufuneka sizibonele ngokwethu: hlala ubukele iziphumo zethu zovavanyo lwebhetri, uyeza kungekudala.
Ishaja ye-15W TurboPower, ebandakanyiwe kwibhokisi yeMoto Razr, kufuneka inyuse ibhetri enkulu kangaka ngokukhawuleza.
Sivavanye i-Moto Razr 2020 kunye neepos; ubomi bebhetri ngokuchasene nabo bakhuphisana nabo: nangona i-apos ayibalasele ngokuthelekiswa nezinye iifowuni ezininzi, kwaye ziziphethe kakuhle:
Uvavanyo lokukhangela i-60Hz
Ukusasazwa kwevidiyo yeYouTube
Umdlalo we3D 60Hz
igama iiyure Ephakamileyo kungcono
Iselfowuni razr (2020) 7h 16 imiz
I-Samsung Galaxy Z Flip 8h 26 imiz
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 7h 5 imiz
Iselfowuni razr (2020) 5h 53 imiz
I-Samsung Galaxy Z Flip 6h 40 imiz
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 7h 10 imiz
Iselfowuni razr (2020) 5h 5 imiz
I-Samsung Galaxy Z Flip 7h 46 imiz
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 9h 9 imiz
igama imizuzu Ezantsi kungcono
Iselfowuni razr (2020) 103
I-Samsung Galaxy Z Flip 103
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 84
Iselfowuni razr (2020) 6h 16 imiz
I-Samsung Galaxy Z Flip 7h 35 imiz
I-Samsung Galaxy Z Fold 2 7h 31 imiz
ipad pro vs iMacbook pro 2020
Iifowuni ye-11 yasimahla
IWebDriver ngokungacacanga, Imizekelo yokuCacisa kunye nokuTyibilika
Izinto ezingenamsebenzi ezincinci: kutheni kungekho qhosha 'Misa kancinci' lokurekhoda ividiyo kwi-iPhone nakwisitokhwe se-Android?
Ukuqala namhlanje, ungongeza izincamathelisi ze-GIF kumabali akho e-Instagram
Ukutyabeka kwe-oleophobic -yintoni, uyicoca njani ifowuni yakho, ukuba uza kwenza ntoni xa isambatho siphelile
ICyber ​​ngoMvulo kunye nokuwa kwe2018: Apple, Samsung, Google, Walmart, Costco, kunye nokuninzi
Ungabutshintsha njani ubuntununtunu bokuchukumisa i-3D kwi-Apple iPhone 6s nakwi-iPhone 6s Plus
I-Verizon & apos; brand new Samsung Galaxy S20 5G UW sele ithengiswa ngesaphulelo esikhulu
I-AMOLED ye-Burn-in Fixer ithembisa ukulungiswa okulula kwescreen sakho se-smartphone se-Android kunye nemicimbi yokutshisa
I-Samsung Galaxy S8 Active ifika eMelika kule veki, kwaye awuzukuba yi-AT & T ekhethekileyo ngonaphakade